I-Aatcc Crockmeter, i-Aatcc yokuhlamba imibala ye-Aatcc, i-Abrasion kunye neTester yokuPhelisa - TST
I-TST yayiqokelele uyilo lwesoftware, oomatshini, oomatshini, ocinezelo lweoyile, uxinzelelo lwempompo, ielektroniki, iimoto, kunye nophando kunye nophuhliso, ukuqinisekiswa komgangatho, ukulawulwa kwemveliso, ukuvavanywa kunye nabanye abanetalente yokufumana ulwazi lwexesha elifanelekileyo. Izixhobo ze-TST (China) Co, Ltd zamiselwa ngo-Matshi ka-2006, eyinkampani yamanye amazwe ekuqeqesheni umatshini wovavanyo kunye nezixhobo ezizisebenzelayo.
Yasekwa ngonyaka ka-2006
Amava kweminyaka eli-14
Ngaphezulu kweemveliso ezili-100
Bhala izisombululo zezixhobo zaselabhoratri zovavanyo kwaye udibanise imveliso, uyilo nophando kunye nophuhliso
Iibhegi kunye neTeksi yeeTayile
izisombululo test ilebhu
Ifanitshala yeLebhu yeZisombululo
Ukusetyenziswa: kwebhentshi yovavanyo lokulinganisa ukusebenza kwe-PM kulungele uvavanyo lwentsebenzo ye-45% -99.9% yemathiriyeli yokuhlunga yebakala. Izixhobo zokucoca zivavanywa ngokwemigangatho yamazwe. Uyilo loyilo lwebhentshi yovavanyo iyonke icwebile kwaye ilula, kwaye kwinkqubo yokuqhuba uvavanyo, kufuneka inikeze kuphela amandla ongezelelweyo afanelekileyo kunye nomoya oxinzelelweyo (akukho manzi, akukho mafutha), ilungele ukusetyenziswa kwiilebhu, kwimizi-mveliso nakwezinye izinto izihlandlo. Kuvavanyo lwephepha lokuhlutha, ...
Ukuchasana kwe-Abrasion ...
Itrayi yokutsala i-Crush Tester / Edge ...
Ukhuseleko kwi-matriya yokhuseleko ...
Umvavanyi webhokisi ...
Ukuhlanjwa kwephepha lodonga ...
Ukulinganisa iTranspo ...
Iphakheji ibandakanya Impembelelo ...
I-ISO535 Cobb Iphepha kunye ...
Ukuchaneka kweChemical Dryin ...
Amadriveti eMidlalo ...
Ifenitshala yeenkuni ...
Kwiminyaka yakutshanje, umzi mveliso wefanitshala wase China uphuhlise ngokumangalisayo.
Kwiminyaka yakutshanje, umzi mveliso wefanitshala wase China uphuhlise ngokumangalisayo. Ngelixa uphuculo olukhawulezileyo sefenitshala yeofisi, umgangatho weemveliso ukwangumbandela ongenakutyeshelwa. Ke ngoko, abavelisi befanitshala bahlala bekhetha izixhobo zovavanyo lwefanitshala njengemveliso yabo ...